Umkhuleko kuSanta Helena Wokuphelelwa Yithemba futhi? Bophela uthando
Umkhuleko ku-Helena Helena Ukuphelelwa yithemba kwendoda futhi ungayikushiyi, akusoze kwaba yisenzo sobugovu noma esingenanjongo, kungaba yisicelo esinqenayo, kepha kwenziwa othandweni kanye nesidingo sokuphindiselwa.
Abaningi bacabanga ukuthi umkhuleko uwukuchitha isikhathi, kepha iqiniso ukuthi abawazi amandla ukuthi lesi senzo sinamandla phezu kwethu nokuthi yini esisizungezile.
U-Santa Helena wayengowesifazane njengabo bonke abanye ababhekana nobunzima kulo mhlaba ezindaweni eziningi yingakho akekho umuntu ongcono kuye ongaphakamisa imithandazo yethu, labo lapho inhliziyo ibandakanyeka khona, lapho sicela khona omunye umuntu osephuzu Ukubukwa kwezithandani noma izithandani.
1 Umkhuleko ku-Helena Helena
1.1 Umkhuleko kuSanta Helena wokuphelisa yithemba indoda futhi ungalokothi umshiye
1.2 Umkhuleko kaSanta Elena ukuthi angicabange futhi angishayele ucingo
1.3 Umkhuleko kuSanta Helena ukubopha uthando
2 Ngabe ngidinga ukukhanyisa ikhandlela ukuze ngithandaze?
Abaningi bamazi njengoba Santa Elena noma njengo-Elena waseConstantinople kodwa igama lakhe langempela nguFlavia Julia Helena futhi wayeyindlovukazi yowesifazane waseRoma owamenyezelwa njengoSanta wamaKatolika, ama-Orthodox namaLuthela.
Lo ngcwele nguyena owaletha umbusi emhlabeni owanikeza inkululeko kubantu abangamaKristu kulokho okwakushushiswa isikhathi eside ngokwenkolo emlandweni.
U-Elena, lapho exoshwa ngumyeni wakhe wayephila impilo yobungcwele egcwele izinhlungu nokuhlupheka ngenxa yothando olungazange luphinde lubonwe.
Lokhu kuhlukunyezwa kukaSanta Elena kwathatha iminyaka eyishumi nane lapho ahlala khona alahliwe futhi wabeka eceleni ngenkathi ebona umyeni wakhe ejabule nomunye wesifazane ngaphansi kophahla lwakhe.
Wayengumfel 'ukholo owaba yisibonelo samandla nosizo kubantu abaningi abangazithola besezimweni ezifanayo.
Umkhuleko kuSanta Helena wokuphelisa yithemba indoda futhi ungalokothi umshiye
Glitter Saint Helena, saint othandekayo, ngize ukukucela ukuthi ungiphe ngomusa wakhe omkhulu, ukuthi (igama lomuntu) ungangishiyi, ungabheki omunye umuntu wesifazane, emsebenzini, emgwaqweni futhi nomaphi lapho ngihlala ngicabanga ngami, umzimba womuntu nomoya (()) woza, ngoba ngikubiza, ngishintsha Mlingisi, nginamandla phezu kwakho.
USanta Elena, onamandla othandweni, ungamniki ukuthula kwengqondo, ukuthi angashiyi imicabango yakhe, ukuthi igama lami liyamhlukumeza futhi alimshiyi yedwa, ukuthi akaphinde afune ezinye izindebe kuphela ezami, ukuthi zonke izifiso zenyama zomunye ziyafa Owesifazane, yimi kuphela engingazizwa ngijabule ngoba ngiboshiwe.
Oh Saint Elena, uzongisiza ukuthi nginqobe inhliziyo yakho futhi, thambisa ukuziqhenya kwakho kanye nomlingiswa wakho, uyeke ukusungula, (()) wazi ukuthi kungokwami, ulahlekelwe ukubekezela uma kunjalo nangomunye, inkohliso Ithemba lisothandweni lwami maqondana (...).
Ngabe uwuthandile umthandazo onamandla kaSanta Helena wokulahla ithemba lomuntu futhi ungamshiyi?
Ukuhlala ngaphansi kophahla olufanayo nomlingani ongasiniki ukuqina okungokomzwelo kungenye yezindawo ezinamandla futhi ezivame kakhulu ezihlala emakhaya namuhla.
Labobobudlelwano othandweni nasothandweni olushiye umbhede osondelene kobuhlobo manje bube yindawo ebandayo futhi engazinzile lapho ukungaqiniseki nokungazwisisi kuyikhona okukhona kuyo yonke imvelo yekhaya, kufakwa yonke into ngamandla amabi Bangcolisa imvelo.
Kulezi zimo lapho umthandazo uba ukuphela kwethu Yilapho imikhuleko eya e-Santa Helena iba namandla.
Umkhuleko kaSanta Elena ukuthi angicabange futhi angishayele ucingo
O Khazimula iSanta Helena, ukuthi uye eKalvari futhi waletha izipikili ezintathu.
Oyinike indodana yakho uConstantine, enye wayiphonsa olwandle, ukuze abagibeli babe nempilo, kwathi eyesithathu bayithwala ezandleni zakho eziyigugu.
I-Helena Helena, (igama lakho) ngicela unginike lesi sikhonkwane sesithathu, ukuze ngikubeke enhliziyweni (yegama lesithandwa sakho), ukuze anginakho ukuthula noma ukuthula uma nje ngingahlali, Ungangishadi futhi ngitshele uthando lwakho lweqiniso.
Imimoya yokukhanya ekhanyisela imiphefumulo, ikhanyisela inhliziyo ye (igama lesithandwa sakho), ukuze angikhumbule ngaso sonke isikhathi, angithande, angikhonze futhi angifise, futhi noma yini anginika yona, iqhutshwa ngamandla akho, uSanta Helena, kwangathi angaba inceku yothando lwami.
Ukuthi ukuthula nokuzwana akunakho aze afike azohlala nami, futhi aphile nami, abe ngumthandi wami, onomusa futhi onesibindi. Ithembekile kimi njengenja, imnene njengewundlu futhi iyashesha njengesithunywa, ukuthi (igama lesithandwa sakho) ize kimi ngokuphuthumayo, ngaphandle kwamandla athile omzimba noma angokomoya ongamvimba.
Kwangathi umzimba wakhe, umphefumulo nomoya wakhe kungafika ngoba ngiyabiza futhi ngigqugquzele futhi ngimphathe. Inqobo nje uma engafiki omnene futhi enothando, ezinikele othandweni lwami, unembeza wakhe ngeke umunikeze ukuthula. Uma eqamba amanga, uma engikhaphela, makaxolise ngokungenza ngihlupheke.
(Igama lesithandwa sakho) woza ngoba ngikubiza, ngiyakuyala, ukuthi ubuye kimi ngokushesha (igama lakho), ngamandla e-Santa Helena nezingelosi zethu zokugada.
Ngakho-ke makube njalo, ngakho-ke kuzoba njalo!
Ngokholo yonke imithandazo inamandla nomkhuleko wokuba uSanta Elena acabange ngami futhi angifonele kuyefana.
Ukwenza lokhu kanye nayo yonke imithandazo esuka enhliziyweni kuyindlela enhle kakhulu ngoba leyo mizwa nokukhathazeka esikugcina ekujuleni komphefumulo wethu kuveziwe.
Mcele ukuthi acabange ngami akuyona indlela yokubusa imicabango yomunye umuntu kepha kuyindlela ye gcina ubumbano ebudlelwaneni.
Amandla amahle esinikela ngawo ngemuva kokwenza umthandazo ngokuqinisekile azosiza ukuthuthukisa isimo semvelo yethu.
Ukucela uSanta Elena ukuthi asisize ukuze lowo muntu okhethekile angayeki ukucabanga ngathi kuze kube seqophelweni lokuba nesidingo sokwenza enye indlela noma ngabe kungenxa yocingo kungenye yemikhuleko evame ukuthandazwa namuhla.
Ikhaya liqala ukugcwala ukuthula futhi kancane kancane isimo siqala ukuba yimpendulo ebesiyilindele.
Umkhuleko kuSanta Helena ukubopha uthando
Hhawu Somress omuhle uSanta Elena, namuhla ngiza kuwe ngigcwele ukholo nethemba, ukuzongisiza ngithole (igama lomuntu) engilithandayo, uyazi ikusasa nelamanje, ngiyacela ukuthi ubone impilo yami, yenza ( ...) zindla futhi uqaphele iphutha.
Ubusisiwe uSanta Elena, ngesihe sakho esingapheli, ngisize ukuba ngithole usizo oluphuthumayo enhliziyweni yami, ngithole umuntu engimthandayo, uyazi ukuthi imizwa yami imsulwa futhi iqotho, thambisa inhliziyo yakho ukuze wazi ukuthi ungalwazisa kanjani uthando lwami.
USanta Elena, umama oyisibonelo, umKristu ophelele, (…) akayena umuntu wokucasulwa, wakhanyisela ingqondo yakhe, amenze acabangele, ngothando konke kunganqotshwa, kude namathonya amabi aphazamisa ingqondo yakhe kakhulu, wayenephutha, wahamba no Umuntu okhonjisiwe kancane, obuyela ekhaya (...), sikulindile.
Oh Saint Elena wesiphambano, ngiyazi ukuthi ungenza konke, ngeke ungilahle, ulalele izwi lami, izwi lemikhuleko yami ucele isicelo sami.
Lona umkhuleko USanta Elena ukubopha owesilisa uyanconywa ezimweni lapho omunye wabantu ababili abathintekayo ebudlelwaneni ecabanga ukushiya noma aveze ukungabaza okuthile okuqala ukuphula izisekelo eziqinile zobudlelwano obuletha ukunganeliseki, ukulwa, ukungaboni ngaso linye nezingxabano ekhaya .
Yilokho umthandazo wokudinga imayelana nakho, ukuthi omunye umuntu ongahlukani ngokungazelele, ahlala nathi kepha engahambisani nentando yakhe kodwa eqiniseka ukuthi ukuhlala kuyindlela enhle ngakho-ke ushintshe umqondo wokushiya ikhaya .
Ngabe ngidinga ukukhanyisa ikhandlela ukuze ngithandaze?
Sincoma ukuthi khanyisa ikhandlela elimhlophe ekuqaleni noma ekugcineni komkhuleko weSanta Helena Ukuphelelwa ithemba nokubopha uthando.
Ikhandlela liwuphawu lokubonga. Sibonga le ngcwele enamandla ngalo lonke usizo lwayo ezimpilweni zethu,
Thandaza ngokholo oluningi nothando oluningi.